Lazaina fa Manana Fitaovam-piadiana Mahery Vaika ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia | Vaovao JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Chitumbuka Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Italianina Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Yorobà
Nilaza ny mpanao gazety maro maneran-tany fa vao haingana ny manam-pahefana rosianina no nanao fikarohana tany amin’ny faritr’i Kirov ka nahita fitaovam-piadiana lazaina fa an’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tany an-tranon’ny lehilahy iray tsy Vavolombelona anefa no nahitan’ny manam-pahefana azy ireo. Grenady roa sy vanja milevina iray, izay samy fitaovam-piadiana tamin’ny Ady Lehibe II sady tsy mandeha intsony no hitan’izy ireo. Vavolombelon’i Jehovah ny vadin’io lehilahy io ary toa tsy nahafantatra ny fisian’izy ireo akory.
Lehiben’ny ekipa iray ao amin’ny “Poisk” (na Fikarohana), any Rosia, ilay lehilahy nahitana an’ireo fitaovam-piadiana ireo. Mikaroka ny fatin’ny miaramila tamin’ny Ady Lehibe II io fikambanana malaza io mba handevenana azy ireo. Matetika ireny mpikaroka ireny no mahita zavatra nampiasaina tamin’ny ady, anisan’izany ny fitaovam-piadiana efa tsy mandeha intsony.
Tsy mitsahatra mamoron-dainga ny manam-pahefana rosianina mba hanimbana ny lazantsika satria isika vahoaka tia fihavanana. Mampahatsiahy antsika ny tenin’i Jesosy izany. Nilaza izy hoe hamoron-dainga ny mpanohitra “ka lazainy fa nanao izao zava-dratsy rehetra izao” ny mpianany.—Matio 5:11.